International News Archives - TheeSayChin
ရဲတပဖြှဲ့ ၄ ခုမှာ ကပွသြိနြး ၆ ထောငကြွောြ အလှဲသုံးစားလုပထြား ပှညထြဲရေးဝနကြှီးဌာန လကအြောကကြ ရဲတပဖြှဲ့ ၄ ခုမှာ ကပွသြိနြး ၆ ထောငကြွောြ အလှဲသုံးစားလုပထြားတာ တှေ့ခဲ့ရတယလြို့ မှနမြာနိုငငြံ စာရငြးစဈခွုပြ အစီရငခြံစာမှာ ဖောပြှထားပါတယြ။ ဒီဇငဘြာလ ၁၇ ရကနြေ့က ပှညထြောငစြုလှှတတြောမြှာ ၆ လတှကြ အစီရငခြံစာကို စာရငြးစဈခွုပြ ဦးမောသြနြးကိုယတြိုငြ လာရောကဖြတကြှားခဲ့ပါတယြ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဧပှီလကနေ စကတြငဘြာလအထိ ကာလအတှကြ စာရငြးစဈခွုပြ အစီရငခြံစာ ဖှဈပါတယြ။ အဲဒီအစီရငခြံစာထဲမှာ ရဲတပဖြှဲ့ ၄ ခုက ကပွသြိနြး ၆ ထောငကြွောြ အလှဲသုံးစားလုပခြဲ့ကှောငြး တငပြှသှားတာ ဖှဈပါတယြ။ အလှဲသုံးစားလုပတြဲ့ ပမာဏ အမွားဆုံးဌာနကတော့ ဟိုပနခြရိုငြ ရဲတပဖြှဲ့မှူးရုံးဖှဈပါတယြ။ အလှဲသုံးစားလုပတြဲ့ […]
ကွန်ပျူတာဂိမ်း ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ဂိမ်း ကစားတာတွေဟာ အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့သူတွေ အဖြစ်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို တဖြေးဖြေးနဲ့ ပြောင်းလဲရတော့မည့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်..။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံတော်တော်များများ ဂိမ်းဟာ Esport အဖြစ် ပါဝင်လာပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲတွေလည်း ကျင်းပ ပေးနေခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေဟာလူမှု ဘဝတွေနဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေတတ်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် ဂိမ်းကစားတဲ့ အသက်အရွယ်ကတော့ လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဂိမ်း ကုမ္မဏီတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ဂိမ်းတွေကို လူတွေ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာဖို့ ၊ ပိုမို သုံးစွဲလာပြီးတော့ စီးပွားရေးတွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အရ ယခုကဲ့သို့ ပြိုင်ပွဲများကျင်းပခြင်း ၊ ဆုများပေးခြင်း ၊ Promotion များ ချပေးခြင်း အပါအဝင် နည်းလမ်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီအပေါ်မှာ တကယ်ကို စွဲလမ်းယစ်မူးစွာ […]
Zawgyi Font ဖှငြ့ဖတရြနြ ဂမဘြီဟာနိုငငြံ၌ သမျမတကို နုတထြှကပြေးရနြ လူပေါငြး သောငြးနဲ့ခွီ လမြးပေါထြှကြ ဆနျဒပှကှ ဘဂါလြီအရေးနှငြ့ပတသြကလြို့ မှနမြာနိုငငြံအား၊နယသြာလနနြိုငငြံ၊သညဟြေ့ဂမြှို့ရှိ အပှညပြှညဆြိုငရြာ တရားရုံးမှာ တရားစှဲဆိုမှု့ လုပခြဲ့ပှီး သူရဲကောငြးနိုငငြံကှီးလုပခြဲ့တဲ့ ဂမဘြီဟာနိုငငြံဟာမှနမြာနှငြ့သညဟြေ့ဂမြှာတရားရေးကှားနာမှု့တှလေုပပြှီးလို့မှ တပတတြောငြ မပှညြ့သေးခငြ လကရြှိသမျမတ ကို သမျမတသကတြမြး၃နှဈအပှညြ့၌နုတထြှကပြေးဖို့ရနြ ပှညသြူတှကေ ဆနျဒပှ တောငြးဆိုမှု့တှေ လုပလြာကှပါသညြ။ မနေ့တုနြးကဆနျဒပှသူ အရအတှေကြဦးရဟော လူပေါငြး သောငြးနဲ့ခွီတဲ့အထိရှိခဲ့ကှပှီး၊ဂမဘြီဟာနိုငငြံရဲ့မှို့တောြ Banjulလမြးတလွှောကတြို့၌ခွီတကဆြနျဒပှမှု့တှလေုပခြဲ့ကှသညြ။ ဂမဘြီယာနိုငငြံကို ၂၂နှဈအကှာ အုပစြိုးခဲ့တဲ့ သကတြမြးရှညြ yahya Jammehရဲ့ အာဏာရှငြ အုပခြွုပရြေးကိုအဆုံးသတသြှားစဖေို့ရနအြတှကြ ဂမဘြီယာပှညသြူတှဟော ဆိုးသညြ၊ကောငြးသညြ၊ဆိုတာထကြ သမျမတ Adama Barrowကိုယာယီသမျမတသဘော တငမြှှောကကြှရနမြဲပေးခဲ့ကှသညြ။ Barrowကလညြး သူ့ကိုမဲပေးအောငြ မိမိသညြ သမျမတ သကတြမြးကို ၃နှဈသာ တာဝနထြမြးဆောငမြညြ ဖှဈကှောငြးဂငွြးထညြ့၍ စညြးရုံးလှုံ့ဆောမြှု့လုပခြဲ့သညြ။ […]
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာလာစဉ် အသုံးပြုတဲ့ ဂွမ်းကပ်တွေကို အပိုသုံးဖြုန်းပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အခွန်ငွေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ကောက်ခံခဲ့တာကြောင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကို ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ကျန်းမာရေး အတွက် လစဉ် အသုံးပြုနေရတဲ့ ဂွမ်းကပ်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကို ထိန်းချုပ်မှု မရှိတဲ့အပြင် အပိုသုံးဖြုန်း ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အခွန်ငွေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပေးရမယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာဟာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအသိဉာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်တာလဲလို့ ဖွေ့ချတ်ပါတီ ပြောခွင့်ရှိသူ နန်းဆောင်ကစ်ပရီးယားကယောက်ဆိုင်မိုင်းက ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် အနေနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမှု ကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီး ထုတွေကို ငဲ့ကွက်ပြီး အမျိုးသမီးသုံး ဂွမ်းကပ်တွေကို အခွန်လွတ် ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေး သင့်ကြောင်း၊ ဒီပစ္စည်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် […]
NASA astronauts Jessica Meir and Christina Koch conducted the first all-female spacewalk outside of the International Space Station. The spacewalk officially began at 7:38 a.m. ET and lasted for seven hours and 17 minutes, ending at 2:55 p.m. ET. The spacewalk went well, according to both astronauts, and they were even able to accomplish some […]
ပထွေးက ဟိုတယ်ကို ခေါ်သွားပြီး မုဒိန်းကျင့်မယ်မှန်းသိလို့၊ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကခုန်ချပြီး ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့ပထွေးဖြစ်သူက သူမကို ကျောင်းမပို့ဘဲ၊ ဟော်တယ်ဆီကို ခေါ်သွားမှန်းသလို ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ခုန်ချပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း WorldOfBuzz သတင်းက ဖော်ပြထားပါတယ် …. ။ ဒီအကြောင်းကို ApannPyay က ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ် …. ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ကောင်မလေးရဲ့အမည်ကိုတော့ Bunga လို့ အမည်ပြောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါတယ် … ။ သူမရဲ့ ပထွေးကတော့ အသက်(၅၀)နှစ်ပါ … ။ သူဟာ ကလေးမလေးကို ကျောင်းပို့မယ်ဆိုပြီး၊ ဟိုတယ်ဆီကို ခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ အဲဒီကလေးမလေး တက်နေတဲ့ကျောင်းကတော့ Samarinda, Kalimantan Timur မှာ တည်ရှိပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ သူမဟာ […]
(၅) မိနစ်အတွင်း သင်္ချာပုစ္ဆာ(၇၀) ကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ (၈) နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး
ဇူရီတလာပန်ကိုရိုင်းစ်ဟာ အသက် (၈) နှစ်ပဲ ရှိသေးပေမယ့်် ကမ္ဘာ့ဉာဏ်အကောင်းဆုံး ကလေးတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူရီဟာ မက္ကစီကိုနိုင်ငံ တာမိုလီပက်စ်ပြည်နယ် တန်ပီကိုမြို့မှ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ယခု (၂၀၁၉) ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့သင်္ချာဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲမှာ မယုံနိုင်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ထူးခြားတဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းအားနဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာ(၇၀) ကို ခဏတွင်းချင်း ပြီးအောင် ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ကြောင်း scoop.upworthy အွန်လိုင်း စာမျက်နှာရဲ့ သတင်းအရ သိရပါတယ်။သိရပါတယ်။ ???¡ORGULLO MEXICANO!???Ella es Zury Tlapanco Reyes, tiene 8 años de edad.Ganó el primer lugar en el mundial de… Posted by Cristo […]
လမ်းပျော်ကလေးတွေကို စာသင်ပေးနေတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မူကြိုဆရာမလေး
ပရဟိတကို လူတိုင်း လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ အလုပ်က နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အတ္တဟိတ၊ ပရဟိတ။ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေဟာ အတ္တဟိတပါဘဲ။ သူတစ်ပါးအကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ပရဟိတဖြစ်ပါတယ်။ ပရဟိတဟာ လုပ်တတ်ရင် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်း အလွန်ကြီးမားတဲ့ ပရဟိတကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေး၊ လူမှုရေး စတဲ့ လူတို့လွန်ဆန်လို့မရတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာလည်း ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ အခုလည်း ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အချစ်တော် ဆရာမလေး Dara Mae Tuazon ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ အားကျ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ပါဘဲ။ တကယ်တော့ Dara အစိုးရဆီက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူမကိုယ်တိုင်က […]
၄ နှစ်ကြာ ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်ကြက်တူရွေး ပြန်လာတော့ စပိန်လိုချည်း ပြောနေ
Nigel လို့အမည်ရတဲ့ အာဖရိကန် ကြက်တူရွေးလေးတစ်ကောင်ဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားက ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး လေးနှစ်ကြာမှ သခင်ဖြစ်သူနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာကတော့ ဗြိတိန်လေသံနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်းပြောနေကျ ကြက်တူရွေးလေးဟာ စပိန်စကားပြောနေတာပါပဲ။ကြက်တူရွေးလေးဟာ Larry လို့အမည်ရသူတစ်ဦးကိုလည်းရှာဖွေနေတာ သူသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ Nigel ဟာ သူ့လှောင်အိမ်ထဲကထွက်နေစဉ်မှာ Torrance ကိုရောက်လာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဟာ သူပျောက်နေတဲ့ငှက်လေးနဲ့တူတာကြောင့် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nigel လေးဟာ သီချင်းဆိုပြီး အချိန်တိုင်းစကားပြောနေတာကြောင့် သခင်သစ်ဟာ သူ့ကိုသိပ်ချစ်သလို သူလည်းပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ Nigel ဟာ ခွေးလိုလဲ ဟောင်တတ်ပါသေးတယ်။Nigel ဟာ အမြဲလိုလို “ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲ” လို့ စပိန်ဘာသာနဲ့ အမြဲလိုလိုမေးနေတဲ့အတွက် အခုသူ့ကိုမွေးထားတဲ့ Julissa ဟာ သူ့ရဲ့အရင်ပိုင်ရှင်ကို စုံစမ်းကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ သူဟာ Nigel ရဲ့ခြေထောက်မှာ မိုက်ခရိုချစ်ပ်လေးတစ်ခုတွေ့ခဲ့ပြီး ဒီပစ္စည်းလေးကြောင့် […]
ပေါင် (၃၉၀)ရှိတဲ့ အီရန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားကြီး ၊ ထိုးသတ်မယ့်သူ ရှာတွေ့သွားပြီ
ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မယ့်သူ ရှာမတွေ့လို့ ကြိုးဝိုင်းထဲ ဝင်မရ ဖြစ်နေတဲ့ အီရန် Hulk ဆိုတဲ့ ပေါင် (၃၉၀) တိုက်ခိုက်ရေးသမားကတော့ ထိုးသတ်မယ့်သူ ရှာတွေ့သွားခဲ့ပါပြီ။ အရပ် (၆)ပေ (၂)လက်မ ရှိတဲ့ အီရန်နိုင်ငံက လူထွားကြီး ဂါရီဘီ ဟာ လာမယ့် (၂၀၂၀) ဇန်နဝါရီ မှာ ထိုးသန်ဖို့ အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဆီမှာ စာရင်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကို စတင်ရတော့မှာပါ။ #VÍDEO ▶️ El Bare Knucke Fighting Championship ha fichadoaSajad Gharibi, el famoso ‘Hulk iraní’ https://t.co/k7ZjcEHcf6 — Antena3Deportes (@Antena3Deportes) November […]